Umqeqeshi ululeka umgadli woSuthu
NDUDUZO DLADLA | June 2, 2020
UMGADLI waMaZulu FC, uBongi “Mdeva” Ntuli, ogaqelwe ngamaqembu amakhlu eGauteng, useshaye amagoli awu-13 kwi-Absa Premiership selokhu kuqale isizini.
Empeleni uNtuli wehlulwa uGabadinho Mhango we-Orlando Pirates (oseshaye amagoli awu-14).
Ukugqama kukaNtuli kumdonsele amehlo emaqenjini amaningi. Sekunezinkulumo zokuthi amaqembu amakhulu eGauteng amgaqele.
Kuke kwavela nasemazikweni ehlukene abezindaba ukuthi AmaZulu afuna imali eshisiwe ngoNtuli uma kukhona abafuna ukuqala izingxoxo.
UCavin Johnson oqeqeshe uNtuli kwiPlatinum Stars nasoSuthwini, ukholelwa ekutheni sekufana nekhaya lakhe (uNtuli) kuMaZulu.
Noma uJohnson engasho ukuthi uNtuli kumele ahlale eqenjini elizinze eThekwini kodwa uthe impatho ayithola kuMaZulu iyona okumele ayibeke phambili ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuba uyahamba noma uyahlala.
“Ngiyakhumbula ukuthi uNtuli ngangimfunisa okomsebenzi esadlalela iLamontville Golden Arrows mina ngisapheka iPlatinum Stars. Ngeshwa wakhetha ukujoyina iMamelodi Sundowns kodwa izinto zangahamba kahle,” kusho uJohnson.
"Ngaxoxa noPitso Mosimane wavuma ukuthi abolekise kwezami iStars. Ufike wagqama waqhulula amagoli amaningi ngoba ngangikholelwa kakhulu kuyena."
"Kungakho sithe uma sihlangana futhi kuMaZulu, ngaqinisekisa ukuthi simthola ngokuphelele ngokudayisa u-Emiliano Tade, samthola ngokuphelele. Ungumgadli oseqophelweni eliphezulu kakhulu futhi akazenzi izinto ezibhedayo. Uthanda ukuzincokolela nokwenza kahle umsebenzi."
Eqhubeka echaza uthe ayisona isinqumo esilula indaba yokuhamba nokuhlala kukaNtuli kuMaZulu.
LAPHA uBongi Ntuli wathathwa ejabulela elinye lamagoli akhe asamise AmaZulu kule sizini ebucayi Isithombe: BACKPAGEPIX
“Akaseyona neze ingane, uyakhula. Uma ngingaphosisi ubheke eminyakeni ewu-30 manje. Kuhle futhi ukuthi useshaye amagoli amaningi ngale ndlela kule sizini ngoba vele usesikhathini lapho khona kumele agqame ngoba usezobuye ahlaselwe wukukhula eminyakeni embalwa ezayo."
"Okugqamile lapha wukuthi impatho kuMaZulu yinhle kakhulu kuNtuli. Uhleli kahle futhi ungasekhaya nokuyinto obese kunesikhathi eyifuna kwazise ubesebenzela kude nekhaya."
"Engikwazi ngoNtuli wukuthi udlala kahle uma ephatheke kahle, futhi neqembu likhombisa ukumethemba. Uma egcina ngokuhamba, asethembe ukuthi lapho eyoya ekhona impatho iyofana ncamashi neyaMaZulu.”
Esanda kusayina ngokuphelele kuMaZulu, uNtuli waxoxa nezintatheli eveza ukuthi weneme kanjani ngokuthi ekugcineni usegcine ephumile “eGibhithe”.
Hleze imenenja yakhe, naye, bazokukhumbula okwabehlela kwiSundowns, bathathe isinqumo esizobeka phambili uNtuli nekhono lakhe.
Khonamanjalo kulindeleke ukuthi amaqembu ePremier Soccer League aqale ukuziqeqesha ngokugcwele kule nyanga emuva kwekhefu lezinyanga ezimbili. Kusho ukuthi akusekude imidlalo ibuyele ngokugcwele.